Ny haingo amin'ny efitrano fandroana ireo 16 "Andininy antsipirihany", ataovy izay mety, afaka mamonjy antsasaky ny raharaha
Home / Blog / Ny haingo amin'ny efitrano fandroana an'ireo 16 "Andininy antsipirihany", manao ny mety, dia mahavonjy antsasaky ny raharaha
2021 / 04 / 22 FisokajianaBlog 4801 0
Voalaza fa ny lakozia volamena sy ny fandroana volafotsy. Haingo an-trano maro ny olona, ​​ny lanjan'ny fandroana dia tsy avo loatra. Ary raha ny tena izy, ny trano fandroana dia toerana iray ampiasantsika matetika matetika isan'andro, ary tsy manaraka ny fironana na mandany vola bebe kokoa amin'izany. Momba ny fandroana an'ireto pitsopitsony kely 16 ireto dia mila fantatrao!
Ny fametrahana ny efitrano fandroana dia azo atsofoka amin'ny fantsom-pitaovana, evanjelika feno fitiavana ny manasa volo OCD. Matetika ny fampiasana dia mety ho switch maromaro hisolo ny rano mivoaka. Io no fiasa mitovy amin'ny lohan'ny fandroana ao amin'ny trano fandroana. Misintona hanasa ny volonao, avereno rehefa tsy ampiasaina. Amin'ny maraina maika handeha any am-piasana, dia tsy mila manokatra fandroana ianao vao mahazo ny rano rehetra.
Ao ambadiky ny fitaovana fanadiovana fitehirizana varavarana
Ny ao ambadiky ny varavaran'ny trano fidiovana dia ampiasaina hitahirizana fitaovana fanadiovana, raha ampitahaina amin'ny kabinetra fitahirizana manokana dia tsotra kokoa ary lafo kokoa. Rehefa manokatra ny varavarana ianao dia tsy hisy fiantraikany amin'ny hatsaran'ny varavarana izany. Ny fitaovana fanadiovana rindrina mihantona koa dia mety ho ritra tsara sy maina, tsy hamokatra fofona. Afaka diovina mivantana ao amin'ny trano fidiovana, tsipika mihetsika fohy.
Fitaovana fanamainana volo
Ny volo fanamainana dia tsy mivantana eo amin'ny latabatra, azo tehirizina amin'ny talantalana tsy misy fantsika, asaina mifidy miaraka amin'ny coil hampihenana ny rano hikasika ny plug. Ary ny tsara indrindra dia ity maodely manerantany ity, karazana fanamainana volo isan-karazany azo apetraka. Ny fitambaran-doko dia tsy vidy ambony ihany, fa afaka manome ny fandroana manao accents koa.
Ny kabinetran'ny trano fidiovana dia mihidy 30 cm
Ny kabinetran'ny fandroana dia mihalona 30 cm, noho ny famelana elanelana kely hanadiovana, ny ambany koa dia afaka mametraka harona fitehirizana sns., Ny ankapobeny koa toa tsy be. Mazava ho azy, raha manao izany ianao, ny tatatra fandroana dia tsara indrindra ny manao andalana rindrina, tsy hampiharihary fantsona tsy mahasarika ny ao ambany.
Fisarahana mando sy maina
Ny efitrano fandroana dia tsy afaka manao fisarahana efatra amin'ny Japoney, fa tsara kokoa koa ny manao fisarahana mando sy maina, mba tsy hifanelingelina eo amin'ny fanasana sy ny fidiovana. Raha betsaka ny olona mipetraka ao an-trano dia vao mainka ilaina izany.
Ny trano fidiovana marani-tsaina dia lafo, fa izy ireo no mandroso indrindra amin'ny teknolojia sy ny trano fidiovana tsara indrindra misy.
Ny Niches no fomba tsara indrindra hampiakarana ny toerana fitahirizana ao amin'ny trano fidiovana, indrindra fa ny trano fidiovana kely dia kely, misy talantalana misy fiantraikany amin'ny fandroana. Ahoana ny manampy niches roa rehefa manaingo. Amin'io fomba io dia azo atsofoka ny shampoo, gel mandro, fanasana tarehy sns. Ny afovoan'ny akany dia mety ho biriky na hazo ekolojika. Rehefa manamboatra azy dia atsofohy mivoaka kely izy mba tsy hiangona ny rano.
Ny lance fidiovana dia ilaina amin'ny fanadiovana tsy ny trano fidiovana ihany, fa koa ny rindrina sy ny gorodon'ny trano fidiovana. Satria lehibe ny hery fanosehana, dia azo diovina anaty rano iray izy io, mamonjy ny antsasaky ny ezaka ny mpikarakara tokantrano.
Mametraha faritra fitehirizana slipper shower
Aza adino ny manangana faritra fitahirizana slipper ao amin'ny faritry ny fandroana fandroana, fa tsy ampirisihina velively ny hametraka kapaoty mivantana amin'ny toerany. Tsy mando ihany, fa miseho misavoritaka ihany koa. Misafidiana talantalana vita amin'ny rindrina toy izao mba hitazomana ho maina sy hadio ara-pahasalamana isaky ny ara-potoana.
Lakaoly porcelain fa tsy lakaoly fitaratra
Ny faladian'ny trano fidiovana sy ny elanelana amin'ny tany dia matetika ampiasaina amin'ny lakaoly fitaratra, ary ny lakaoly fitaratra dia ho bobongolo aorian'ny fotoana maromaro. Ahoana ny fampiasana lakaoly porselana, mora ny vidiny ary tsy hamolavola. Raha ampitahaina amin'ny lakaoly fitaratra dia mila esorina imbetsaka ihany koa ny bobongolo, nefa koa mitahiry fotoana be sy lafo.
Ny heateran'ny faritra mando dia mahery vaika kokoa noho ny fandroana sy ny mpankafy, samy miasa ny rivotra, fa koa ny fanafanana, dehumidification, ny ririnina. Afaka maina akanjo ihany koa, ny safidy voalohany ho an'ny ankizy ao an-trano.
Ho an'ny efitra fandroana tery kokoa dia asaina ny tsy mifidy fitoeram-pako misokatra, izay ho be olona be ary koa misy fofona.
Mahatsiaro ho tsy mahazo aina foana ianao rehefa mampiasa kabine, mety tsy manana fitoeran-kabine ianao. Tsy mora ny mampiasa kabine, fa mampihena ny fitohanana koa. Misy ankizy ao an-trano, ny fitoeran-kabine koa dia afaka manampy ny ankizy hianatra fidiovana Oh.
Tompon'ny taratasy fidiovana roa
Raha manana fianakaviana lehibe ianao, dia asaina mampiasa fitoeran-taratasy fidiovana roa. Io boky io matetika ampiasaina, ary habetsahan'ny tahiry, mba hisorohana ny fahafaham-baraka amin'ny fandroana tampoka amin'ny taratasy.
Mpanadio rano madio
Ny gorodon'ny efitrano fidiovana hitazonana ny fahadiovana maharitra sy madio dia tsy mora, ary miaraka amin'ny mpamafafy mpamono ody dia mety ho lasa tena mora be izy rehetra. Na ny fandroana isan'andro na ny fandroana amin'ny efitra fandroana misy rano miorina, dia raiso ny famafazana fikosehana amin'ny rano. Ny vokany dia tsara kokoa noho ny mop, fa tsy misy mariky ny rano koa.
Trano maro, foana ny varavaran'ny trano fidiovana, very maina ny habaka. Raha ny marina dia tsy azo tehirizina mihitsy ireo fitaovana fanadiovana.
Previous :: Ny voalohany eto an-tany! Fandroana fandroana azo antoka sy mahasoa, noho izany dia afaka "mandro" amin'ny haingam-pandehanao ianao